Nutriga အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
မျက်နှာကောင်းရဖို့ အပြည့်အဝတာဝန်ယူပါတယ် wink emoticon
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ ဆေးဝါးအသိအမှတ်ပြု FDA ရထားပြီးသားဆေးပါ
Nutriga က အသက်အရွယ်ကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေပြန်လည်မွေးဖွားပေးနိုင်လို့ ပြန်လည်ကျန်းမာနုပျိူလာစေမှာပါ
Nutriga ကို တစ်နေ့တစ်လုံးပုံမှန်မှီဝဲပေးရုံနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တပြိုက်နက်ခံစားစေရမှာပါ smile emoticon
1. ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေကိုမွေးဖွားပေးနိုင်ပါတယ်
2 . သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့ ရောဂါသည်များအတွက် သွေးတွင်းအဆီတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်
3. ဆီးချို သွေးချို ဝေဒနာရှင်များအတွက်လဲ အနာကျက်မြန်စေခြင်း ပုံမှန်ထက်ရောဂါဝေဒနာလျော့ကျစေခြင်း စတဲ့အကျိူးကျေးဇူးတွေရနိုင်ပါတယ်
4. နှလုံးရောဂါရှင်များ နှလုံးစက်တပ်ထားရတဲ့ဝေဒနာရှင်များအတွက် သာမန်လူကောင်းတွေလိုဘဲ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့ စွမ်းအားကိုပေးပါတယ်ရှင်
5. စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးမြင်သူတွေ သောက်ပေးရင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး အမောခံနိုင်စေပါတယ်
6. လေးဘက်နာရောဂါရှင်တွေ ဂေါက်ရောဂါရှင်တွေသောက်ပေးရင် ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုကိုသက်သာစေနိုင်ပြီး လေးဖက်နာပိုးကိုလျော့ကျစေပါတယ်
7. အသက်အရွယ်ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်နေခဲ့ရင် Nutriga ကိုတစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ပေးရုံနဲ့ ပြန်လည်နုပျိုလှပလာစေနိုင်မှာပါရှင်
8. သွေးလည်ပတ်မှုအားကိုကောင်းစေပြီး သွေးဖြူဥတွေကိုလဲမွေးဖွားပေးနိုင်ပါတယ်
9. အိပ်မပျော် အားအင်မရှိဖြစ်နေတဲ့ နာတာရှည်ဝေဒနာရှင်တွေသောက်ပေးရင် အိပ်ပျော်စားဝင်ပြီး အားအင်ပြန်လည်ပြည့်ဝလာစေမှာပါရှင်
Nutriga ကို သဘာဝ အရည်အသွေးမြင့်မှိုတစ်မျိူးကို အခြေခံဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပျက်စီးနေတဲ့ မည်သည့်နေရာမှ ဆဲလ်တွေကိုမဆို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်တာပါ
Side Effect လုံးဝကင်းကြောင်းကို အာမခံပါတယ်ရှင်
အစွမ်းထက် အားဖြည့်ဓာတ်စာဖြစ်လို့ အကျိုးအာနိသင်အပြည့်အဝရစေဖို့လဲ အာမခံပါတယ်
Nutriga ကို တစ်နေ့တစ်လုံး အစာစားပြီးတိုင်းသောက်ပေးရုံနဲ့ကို အထက်ပါကျေးဇူးတွေတပြိင်နက်ရရှိမှာပါရှင်
Nutriga ကို ဘယ်ကထုတ်တာလဲလို့ သိချင်ကြမှာဘဲနော် smile emoticon
Nutriga ကို ထိုင်းနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရထားတဲ့ Successmore Company မှ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အရမ်းရောင်းရတဲ့ အားဖြည့်ဓာတ်စာလဲဖြစ်ပါတယ်။
Nutriga တစ်ဘူးမှာ တစ်လစာ အလုံး ၃၀ပါဝင်ပါတယ်ရှင်
Price - 62000ks
Nutriga တစ်လသောက်ပြီးတာနဲ့ အရင်မသောက်ထားတဲ့အချိန် အရမ်းကို ကွာခြားပါတယ် လက်တွေ့ခံစားကြည့်ကြပါနော်
ခ န္ဓာ ကိုယ် ဆဲလ် များ နု ပျို ကန်း မာ သန် စွမ်း စေ ဖို့ " နျူ ထ ရီ ဂါ "ကို သောက် ကြ စို့ ...
ပါ ဝင် ပ စ္စည်း တွေ က တော...့
•Beta Glucan(ဘီ တာ ဂ လူ ကန်)
•L-Cysteine(အယ် လ် စီ စ တိန်း)
•Ganoderma Lucidum Extract(လင် ဇီး)
•Ginseng Extract(ဂျင် ဆင်း)
•L-Arginine Monohydrochlorate(အယ် လ် အာ ဂျ နိုင်း)
•Calcium Ascorbate(ကယ် လ် စီ ယမ် အက် စ် ခ ရော ဘတ်)
•Cordyceps Sinensis Extract(ဆောင်း ပိုး နွေ မြက်)
•Grape Seed Extract(စ ပျစ် စေ့)
•Pine Bark Extract(ထင်း ရှူး ခေါက်)
စ တဲ့ သ ဘာ ဝ သစ် မြစ် သစ် ဥ အ သီး အနှံ များ ဖြစ် လို့ size effect ဖြစ် မှာ စိုး ရိမ် စရာ မ လို ပဲ ယုံ ကြည် စိတ် ချ စွာ သုံး စွဲ နိုင် ပါ တယ်.
09 456049318 (viber)
or message box ကနေပေးပို့မှာယူနိုင်ပါတယ်